Toyota Caldina 2002 (#712784) for sale in Mahaaungmyay | CarsDB
5279 total views,9today
Lot Number: #712784
ဂပြနျ တဈနိုငျငံအတှကျသာ ထုတျလုပျရောငျးခတြဲ့ Brand ကို ပွပါဆိုရငျတော့ Caldina ကိုပဲ ညှှနျပွရပါ လိမ့ျမယျ။
ဂပြနျရဲ့ ပွငျပနိုငျငံတှမှော Caldina Brand ကို ရောငျးခခြွငျး မရှိပါဘူး။ အကယျ၍ ဂပြနျပွငျပမှာ တှေ့ခဲ့ရတယျ . ဆိုရငျတော့
ဂပြနျ used market ကနေ တငျသှငျးလာတယျ လို့သာမှတျယူကွတယျ။
Station wagon အနနေဲ့သာထုတျလုပျတဲ့ အမြိုးအစား လညျးဖွဈပါတယျ။ သူ့အရငျ Carina နဲ့ Corona van တှထေုတျလုပျမှု ရပျဆိုငျးပွီးခြိနျမှာ အစားထိုးထုတျခဲ့တဲ့ model တဈမြိုး ဖွဈပွီးတော့ လကျရှိအခြိနျမှာတော့ ထပျမံထုတျလုပျခွငျး မရှိတော့ပါဘူး ။
မြိုးဆကျအနနေဲ့ ၃ ဆကျထိရှိပွီး
(1) First generation T190, ( 1992-1997)
(2) Second generation T210, (1997-2002)
(3) Third generation T240, ( 2002-2007)
ခုရောငျးပေးခငြျတဲ့ကားလေးကတော့ Caldina ရဲ့နောကျဆုံးမြိုးဆကျ
Third Generation စကျရုပျလေးပါ
Third Generation ထဲမှာမှ 2.0 Engine ZT Grade(2.0 2WD ထဲမှာအမွင့ျဆုံး Grade)
1998 CC 1AZ-FSE I4 (152hp) , D-4 Fuel system နဲ့
Chassis ကတော့ TA-AZT241 ( 2WD)
ZT Grade အမှနျကားလေးကို သကျတမျးအသဈနဲ့ ကားရှယျလေးဗြာ။
ဂျပန် တစ်နိုင်ငံအတွက်သာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ Brand ကို ပြပါဆိုရင်တော့ Caldina ကိုပဲ ညွှန်ပြရပါ လိမ့်မယ်။
ဂျပန်ရဲ့ ပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာ Caldina Brand ကို ရောင်းချခြင်း မရှိပါဘူး။ အကယ်၍ ဂျပန်ပြင်ပမှာ တွေ့ခဲ့ရတယ် . ဆိုရင်တော့
ဂျပန် used market ကနေ တင်သွင်းလာတယ် လို့သာမှတ်ယူကြတယ်။
Station wagon အနေနဲ့သာထုတ်လုပ်တဲ့ အမျိုးအစား လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အရင် Carina နဲ့ Corona van တွေထုတ်လုပ်မှု ရပ်ဆိုင်းပြီးချိန်မှာ အစားထိုးထုတ်ခဲ့တဲ့ model တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီးတော့ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ထပ်မံထုတ်လုပ်ခြင်း မရှိတော့ပါဘူး ။
မျိုးဆက်အနေနဲ့ ၃ ဆက်ထိရှိပြီး
ခုရောင်းပေးချင်တဲ့ကားလေးကတော့ Caldina ရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်
Third Generation စက်ရုပ်လေးပါ
Third Generation ထဲမှာမှ 2.0 Engine ZT Grade(2.0 2WD ထဲမှာအမြင့်ဆုံး Grade)
Chassis ကေတာ့ TA-AZT241 ( 2WD)
ZT Grade အမှန် ကားရှယ်လေးဗျာ။
In order to avoid being mistaken for scammers, please mention to Khaing Thin Zaw that you are enquiring about Toyota Caldina 2002 posted on CarsDB when you are calling.